UKUHLAWULA NGOKUPHELELELEYO KWIPANDA: ISIKHOKELO NGENYATHELO-NGENYATHELO
"Yintoni elandelayo?" usenokuzibuza. Ngoku ukuba uthathe isigqibo sokufunda ngakumbi ngeDropshipping nathi, masiqale.
INYATHELO 1: UKUFUMANEKA UKUFUMANEKA KWETHENGA
● Usinika imvume yokujonga ii-odolo zakho. Konke okufuneka ukwenze kukusithumela idilesi ye-imeyile kwaye usivumele ukuba sifikelele kwishishini lakho kwi-Intanethi. Siza kudibanisa usetyenziso lwethu kwivenkile yakho, kwaye siya kulusebenzisa kuphela ukuvelisa iilebheli zokuhambisa.
INYATHELO 2: ISICWANGCISO SEXABISO NEMISEBENZI
● Nje ukuba ivenkile idityaniswe, siya kujonga ukuphinda-phinda imveliso kunye nexabiso lamaxabiso.
INYATHELO 3: UKUTHUTHWA NOKUTHENGWA
● Nje ukuba uqinisekise ukwahluka kwemveliso kunye neebhidi, siya kukujongana nokuthenga kwakho. IFulfillPanda ihlala ifumana indlela yokuzisa amaxabiso kunye nomgangatho kunye. Abasebenzi bethu bagqwesa ekufumaneni izinto ezikumgangatho ophakamileyo ngamaxabiso akhuphisana kakhulu. Singathenga ngokuthe ngqo kubavelisi, sinciphise amaxabiso nge-5-10% xa kuthelekiswa neAliExpress! Ngenxa yevolumu yokuphatha imihla ngemihla, siyakwazi ukufumana elona xabiso lililo ngevolumu yethu yokuthenga, sinciphisa kakhulu inkcitho yakho.
● Ngapha koko, ngenxa yokuba yonke into ihanjisiwe, akukho mfuneko yokuba noluhlu lwezinto ezikhoyo. Siza kuba noxanduva lokugcina umkhondo we-inventri yakho, siyilungelelanise, kwaye siyicwangcise.
INYATHELO 4: UKUHLOLA
● Xa umboneleli ezisa izinto ezithengiweyo kwindawo yethu yokugcina izinto, siqinisekisa nganye nganye ukuqinisekisa ukuba ihlangabezana nemigangatho yemveliso kunye nokusebenza kwayo ngokufanelekileyo. Ngenxa yokuba silithanda kakhulu ishishini lakho ngokungathi lelethu, sithatha ukoneliseka kwabathengi kwaye silixabisa kakhulu.
INYATHELO 5: UKUTHUNYELWA KUNYE NEENKONZO ZOKUthengisa emva
● Singazithumela izinto zakho naphina emhlabeni xa sisebenzisa ukuhambisa ngenqanawe kwangasese kwangoku okanye nayiphi na enye into ephetheyo. Sinokuprinta uphawu lwenkampani yakho kwiibhokisi kunye neepasile, kunye nokubonelela ngamakhadi oshishino.
● Ungagcina umkhondo kwii-odolo zakho kwi-intanethi kwaye ulandele nathi ukuba unayo nayiphi na ingxaki malunga nokuhanjiswa.
INYATHELO 6: INTLAWULO
● Ukuhlawula, ukuTshintshela, ukuTshintshela iWire kunye nezinye iindlela zokuhlawula ziyafumaneka.
INYATHELO 7: Yabelana NGOKUHLAZIYA
● Uya kuba neSishwankathelo kunye neeDeshibhodi zeAccounting apho unokujonga khona yonke into; Awudingi ukutshintsha okanye ukutshintsha nantoni na kweli phepha-landela nje. Lonke ulwazi ngokubhekisele kwii-odolo, ubalo kunye nokuhamba kwemali zihlaziywa ngokuthe ngqo nangokuzenzekelayo kwiphepha elabelwe ngokuzenzekelayo likaGoogle. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, sigcina i-Skype Line yethu ivulekile.